China Isitolo esidayisa yonke impahla ngokwezifiso Amalebula Amabhokisi ama-3D Lashes 100% Real Mink Eyelashes Abathengisi ifektri abakhiqizi | Weiti
Isitolo esidayisa yonke impahla ngokwezifiso Amalebula Amalebula e-3D Imivimbo engu-100% Abathengisi Bama-Real Mink Eyelashes
1, isitayela se-AILSA 18mm mink fur imivimbo
2, I-soft, i-fluffy, i-3d eyelashes yemvelo
I-3, ilebula langasese elenziwe ngokwezifiso liyatholakala
I-4, i-100% eyenziwe ngekhwalithi ephezulu yezinwele ze-mink ezikhanyayo ezenziwe ngezandla
I-OEM ne-ODM AMAHLOBO AMANGA
I-logo yangasese yangokwezifiso yangokwezifiso
Intengo yokuncintisana eshibhile
Isipiliyoni sokukhiqiza se-eyelashes esicebile
Ngokwezifiso logo yangasese
200000 ngazimbili ngenyanga
I-SGS, CE, ISO9001
Ama-eyelashes ethu amanga onke enziwe ngezandla, enziwe ngezinwele ze-ultra-light mink, ezithambile futhi ezibushelelezi njengezinkophe zakho zemvelo. I-eyelashes yamanga eyenziwe ngesandla ingasetshenziswa futhi iphathwe ngokucophelela. Usebenzisa ubuchwepheshe be-eyelash eyenziwe, i-eyelashes ingaba yemvelo futhi ithambe njengama-eyelashes wangempela, ekuvumela ukuthi uhlale ugqamile.
Izinhlobo ezahlukahlukene ezidayisa ngokushisa ziyatholakala, futhi ibuye isekele ukwenza ngezifiso izitayela ezidingeka kumakhasimende. Amakhasimende adinga kuphela ukusinikeza izidingo ezithile kanye nemingcele noma amasampula womzimba.
Izinto ezikhethiwe ezingasetshenziswanga ezenziwa ngama-eyelashes, ngemuva kokuqongelelwa kweminyaka eminingi, sesivele sinabahlinzeki bezinto ezisezingeni eliphakeme, abasebenza kahle, isikhathi eside basinikeza ngezinto ezinhle zokusetshenziswa.
100% ezenziwe ngezandla. Uma kuqhathaniswa nokukhiqizwa komshini, ukukhiqizwa okwenziwe ngezandla kungaqinisekisa ukuthi ama-eyelashes angamanga ngeke abe nokudideka, futhi sisebenzisa i-glue ngesandla ukuqinisekisa kangcono ukuthi ama-eyelashes ngeke awele.
Izinhlobonhlobo zokupakisha kwe-eyelash zamanga zingenziwa ngezifiso. Ukuze wenze ngokwezifiso i-logo, ukupakisha kwesitoko okulungele kusekela ukuphrinta kwe-UV kwe-3d. Ibhokisi elenziwe ngokwezifiso lisekela ukuphrinta kwe-UV nokuphrinta okushisayo.
Ngemivimbo yesitoko esimi ngomumo, isikhathi sokulethwa siphakathi kwamahora angama-48, ngemivimbo eyenziwe ngezifiso, isikhathi sokulethwa siphakathi kwezinsuku eziyi-7-25.
Uphenyo lweKlayenti luzonakekelwa okokuqala. Ngemibuzo ephuthumayo, sicela ukhulume nathi ngocingo noma ngomyalezo oqondile.
Kunanoma yiziphi izinkinga zekhwalithi noma ezilimele ngokuhamba, ungacela ukubuyiselwa imali noma uphinde uthumele izimpahla kungakapheli izinsuku ezintathu zokusebenza.
Kungani ugqoke imivimbo yamanga?
Ama-eyelashes angamanga angenza amehlo abukeke makhulu futhi ahehe, futhi izinga lokugoba lingabuye lifane nezinkophe, ezizobukeka ziheha ngokwengeziwe.
Ama-eyelashes wamanga ayekhona eGibhithe naseRoma lasendulo. Ama-eyelashes ake abhekwa njengophawu olukhanga kakhulu. Kamuva, ngemuva kokuzalwa kwama-eyelashes amanga, abantu abaningi baphinde balandela ama-eyelashes. Ngo-1916, umqondisi wefilimu wasebenzisa izinwele zangempela ukwenza izinkophe ezingamanga ngezidingo zokukhiqizwa kwamafilimu nethelevishini. Kamuva, imodeli yaseBrithani yaqala umkhuba wokugqoka izinkophe zamanga, futhi abantu abaningi bazi ngobukhona bezinkophe zamanga.
Esigabeni sakamuva sama-eyelashes amanga, kunezinhlobo eziningi, ubujamo nemibala ehlukene, nezikhathi ezahlukahlukene. Kepha noma ngabe hlobo luni lwama-eyelashes angamanga, angenza amehlo "akhulume" ngemuva kokuthi efakiwe, futhi amehlo abukekayo anele ukuthakazelisa. Kamuva, abantu abaningi abenelisekanga ngokufaka izinkophe ezingamanga futhi bafisa ukubayeka bakhule ebusweni babo unomphela, futhi inqubo yokwandiswa kwezinkophe yazalwa.
Ngokuvamile, ama-eyelashes okuqala amanga nje ukukhombisa ukuthandeka kwabesifazane, kepha manje ama-eyelashes angamanga anaka kakhulu ukusebenza, afaneleka ukwakheka kwamehlo abantu, kepha futhi angenza amehlo abukeke emakhulu futhi ethandeka.
Langaphambilini Isitolo esidayisa yonke impahla Label Private 100% Handmade Cruelty Free 3D Mink Eyelashes Vendor
Olandelayo: Dala Ilebuli Yakho Eyimfihlo Elingaphezulu Kwama-Eyelashes Amanga Mink
I-100% mink eyelashes
3d mink imivimbo yomthengisi
dala imivimbo yakho
abathengisi be-mink eyelashes
Isitolo esidayisa yonke impahla Ezenziwe Ngesandla Ukujiya Fluffy 3d Mink Lashes ...
imivimbo ye-mink, Ukuqhuma Kwamehlo, ezambiwa, i-eye liner, Abadayisi bezinkophe, Izandiso ze-Eyelash,